Iiraan oo Mareykanka uga digtay tuhunka maraakiibta shidaalka ee la weeraray – Radio Daljir
Iiraan oo Mareykanka uga digtay tuhunka maraakiibta shidaalka ee la weeraray
Juunyo 14, 2019 2:05 g 0
Iiraan ayaa uga digtay dowladda Mareykanka inay joojiso eedaymaha cayaarta ku salaysan ee tuhunka maraakiibta shidaalka rarayay ee xeebaha Bariga Dhexe, taasi oo ay sheegtay inay welwel abuurayso.
Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan Cabaas Mousafi ayaa Jimcahan maanta sheegay hadalkaasi kadib markii xoghahaya arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo uu ku eedeeyey Tehran weerarada lagu qaaday laba ka mid ah maraakiibta shidaalka ee xeebaha Gacanka Cumaan.
“Shilka tuhunkan dabiiciga ah ee maraakiibta rarka shidaalka ma’ ahan arrin lagu kaftmo ama lagu maadsado, balse waa arrin welwel iyo qaylo dhaan ah” ayuu yiri Mowsafi oo soo saaray qoraal.
Weerarada Khamiistii subaxnimadii dhacay ayaa mowjado aragagax ah u diray caalamka, kuwaasi oo kusoo beegmay xilli kulan uu dhexmarayay raysal wasaaraha Jabaan Shinzo Abe iyo hogaamiyaha jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan Ayatollah Seyyed Ali Khamenei oo kadhacayay Tehran.
Pompeo ayaa sheegay “kadib qiimayn ay sameysay dowladda Mareykanka inay ku ogaadeen weerarka inay masuul ka tahay dowladda Iiraan, kaasi oo kadhacay Gacanka Cumaan” jawaabtaasi oo ah mid degdeg kusoo baxday.